/Blog/Andarine , S4/Thenga i-S4 (i-Andarine) I-Powder Online | Yonke into ofuna ukuyifumana
ezaposwa ngomhla 04 / 25 / 2018 by UDkt Patrick Young bha liweyo Andarine, S4. Ibe 2 Comments.
Yonke into malunga ne-S4 (Andarine) ipowder
1.Yintoni i-S4 (Andarine) Ubuninzi?
2.IiSARMS S4 (Andarine)?
3. Indlela yokusebenzisa i-Sarm S4 (i-Andarine) Ubungakanani kunye nokuncoma umlinganiselo?
I-4.SARMS I-Andarine i-Andarine I-S4 powder Imijikelezo
I-5.SARMS I-Andarine iS4 I-Powder Benefits
I-6.SARMS I-S4 (i-Andarine) I-powder Imiphumo ecaleni: Uza "FUNDA" Oko Uyabona
7.Ukucingisisa Ngaphambi kokuthenga i-S4 (i-Andarine) Ubuninzi?
I-8.SARMS I-S4 (i-Andarine) Ukuphonononga: Ngaphambi nangemva kweZiphumo
9.Kubani abaninzi abantu basebenzisa i-Andarine (S4) powder phezu kwe-steroids?
10.Kuphi ukuthenga i-Sarms i-S4 (i-Andarine) Ubukhulu?
I. I-S4 (Andarine) ipowder Abalinganiswa basisiseko:
I-molecular Formula: C17H27Cl2N
1. Yintoni i-S4 (Andarine) Powder?
I-S4 (i-Andarine) I-Powder CAS: 401900-40-1 i-powder ephilileyo ephuzi, igama elipheleleyo le mveliso ngu-S-40503, kodwa iyaziwa ngokuba yi-S-4. yenziwe yinkampani yaseShayina yokuxuba imveliso, i-AASraw Biochemical Pharmaceutical company. Oku kwasekuqaleni kwenziwe ukunyanga i-osteoporosis. Le mveliso yinkxaso enamandla yeSARM eyona nto iyancediswa ngakumbi ngeengcali zenkxaso. I-S4 powder yi-agonist esebenzayo ngomlomo yomsitho we-androgen (AR), kuthiwa yiSARMS enamandla kunayo yonke inceda ukugcina i-musclemass ephilileyo xa ikhuthaza ukuxothwa kwamafutha ngexesha elifanayo.Kuhlobo lwezilwanyana lwe-prostatic hypertrophy, ne-Andarine powder yaboniswa ukunciphisa ubunzima be-prostate kunye nokuphumelela okufanayo kwi-finasteride, kodwa ngaphandle kokuvelisa ukunciphisa ubunzima be-muscle okanye i-side effects ye-antiandrogenic. Oku kubonisa ukuba unako ukukhuphisana ngokukhuphisana ngokubambisana kwe-dihydrotestosterone kwiithagethi zayo zokufumana i-prostate gland, kodwa i-agonist yayo Izenzo kwi-AR ziyakuthintela iziphumo ezichaphazelekayo ezinxulumene ne-antiandrogens ezisetyenziselwa unyango lwe-BPH. Namhlanje, i-Andarine powder iyasetyenziswa kwaye iyathengiswa njengemichiza yocwaningo, esetyenziswa ngabadlali abafuna ukufumana onke amandla kunye nokuzuza kwemisipha engapheliyo nemiphumo echaphazelekayo ebonwayo kunye anabolic steroids.
Igama lemveliso: I-S4 (i-Andarine) I-Powder
Inombolo yeCAS: 401900-40-1
Igama leKhemikhali: (2S)-3-(4-acetamido-phenoxy)-2-hydroxy-2-methyl-N-
Iintetho: I-Andarine powder, i-Andarin, i-S-4, i-S-40503, i-GTx-007
umbala: I-powder ephuzi kakuhle
Umzimba: Propylene Glycol, i-DMSO, i-Ethanol, i-PEG400
2. I-SARMS ye-S4 (Andarine) yomsebenzi wenziwe njani?
I-S4 powder CAS:401900-40-1 isebenza ngokufanelekileyo ngethambo lomntu kunye ne-muscle androgen receptors. Nangona ayinakunceda ekuveliseni iipounds zemisipha, isebenza kakuhle ekupheliseni amafutha. Abakhi bomzimba abasebenzisa i-steroids yokukhwabanisa nabo bathabatha i-SARMS i-S4 powder ukucima zonke iipounds ezifunwayo.
Ezi zilandelayo zihlobo lwe-tre yeekhemikhali ezisebenza kwi-androgen receptor (AR):
I-1st ngu-antagonist we-AR, oyimichiza ebopha kwi-receptor ukukhusela ekusebenziseni.
I-2nd i-AR agonist, ebopha kwi-receptor kunye ne-detaches, iphinda ibophe kwakhona, ngokuphindaphindiweyo.
I-3rd i-modulator ye-AR, okanye ngokukodwa i-molecule edibanisa kwi-AR kwaye ishintsha isakhiwo sayo ukuba senze ntoni nangona sifuna.
Ixesha ngalinye i-AR idibana nayo testosterone powder, I-SARMS S-4 i-powder force ukuze ivelise izakhi zofuzo eziza kuxhamla i-muscle kunye nokukhula kwethambo. Ngamanye amagama, i-S4 powder ifomu ye-SARM edibanisa kwi-androgen receptor (AR) efanayo kunye ne-androgens rhoqo, ukuhluka okukuphela kukuba i-S4 powder ivelisa imisebenzi ekhethekileyo ye-anabolic.Akukhankanywe ngaphambili, SARMS powder isebenze ngokudibanisa kwi-AR eyenzeka kumsebenzi we-anabolic. Ngenxa yokuxhoma kunye nokuvuselela, iprotheni eninzi iveliswa evumela isakhiwo semisipha. I-S4 powder ingabangela ukuphuhliswa kwemisipha ngendlela efana ne-steroids, kodwa iyanciphisa iimpembelelo ezifanayo ezingafunekiyo. I-S4 powder yi-SARM eneempembelelo ezinkulu kunye ne-33% yamandla we-testosterone xa ifakwe kwi-AR. I-S-4 powder iphinda ikhulise inani lemisipha eveliswa ngokuchithisa i-AR kumntu we-testosterone yemvelo ukuba inokuchaphazela umphumo onamandla.
Isisindo se-Sarms S4 ye powder yi-50-75mg isamba ngosuku nge-4 kwiiveki ze-8, ezithathiwe kusasa nangokuhlwa ngokumalunga nemitha. Ukuba i-S4 powder isetyenziswe nge-SARM eninzi ye-anabolic efana ne-Ostarine, iziphumo zokubuyisela ziya kuba ngcono xa ufuna ukufumana izihlunu xa ulahlekelwa yioli. Ngokuphathelele iipropati ze-S4 powder, Andarine powder Ngokuqhelekileyo lifaniswa ne powstrol powder okanye i-anavar powder, ngelixa i-S4 powder inikeza impembelelo engcono kwiimpembelelo ezincinci ze-muscle. Ngaphezu koko, i-Andarine powder iyanciphisa amanoni ngelixa igcina kwaye iphakamisa ubunzima bomzimba kwisimo se-hypocaloric.
I-Andarine powder (S-4) 25mg / ml iresiphi yamanzi yomlomo:
15g S4 (Andarine) Ubuninzi
600ml Utywala Otywalayo
Isisombululo esinconywayo: 50 mg kwiiveki ze-6-8.
* Thatha iintsuku ze-2 xa uthatha i-S4 powder (phinda umjikelezo emva kwekhefu le-2) ukuze ugweme umphumo wecala. I-S4 powder isidla ngokusetyenziswa kwiintsuku ze-5 ezilandelwa yikhefu le-2 (ke lo mjikelo uphindaphinda).
* I-50mg dosing protocol yee-6-8 iiveki ilungele injongo yokusika kubaninzi babasebenzisi.
I-S-4 ipowder powder: I-401900-40-1 ithathwa njengomlomo, ayikho i-methylated kwaye ayiyiyo inetyhefu njengobunye i-AAS / PH / DS. Njengoko kuthintela lo mphumela olungecaleni kunye nabanye abaninzi, intlawulo ephakanyisiweyo ngu-50-75 mg ye-4 kwiiveki ze-8, ixesha elaneleyo lokufumana umzimba omhle.
* I-S-4 powder cas:401900-40-1 akuyena umratshi oza engqondweni xa sicinga "UKUPHILA", kodwa iipropati ekufumaneni i-muscle akufanele zinyanzeliswe. I-Andarine powder iyakwazi ukupakisha kalula kwiimfucu zamathambo kunye nokutya okufanelekileyo kunye neekhalori ezongezelelweyo; Nangona kunjalo, akuyi kubakho ukukhula okukhawulezayo okuqhelekileyo kuphawulwe ngaphakathi kwimijikelezo yokubhukuda ngelixa isetyenziswe yedwa. kwaye ugxume kwii-SARM ezinjalo ezaziwayo I-LGD 4033 Powder or I-RAD 140 powder. Nangona kungekho i-15 lb ehamba kwi-muscle efana nale mveliso, "i-S-4 powder" inokubonelela ngeemali ezininzi kunye nokusetyenziswa kwezi khalori ezingaphezu kwe-8-10 i-muscle ngelixa ligcina umzimba ezinzima. Ukunyuka okunyanisekileyo kwimizimba yesisundu kunokunciphisa inani lomsebenzi omele uyenze kumzimba onqabileyo wehlobo.
* I-Andarine powder inkulu ekuphambeni amandla, ukubonelela ngeengeniso ezilula ukugcina kodwa zicoceke kakhulu kwaye zikhawuleza. Xa injongo yethu ephambili yenzeka ukuba yintlungu, kucetyiswa ukuba isebenzise umthamo we-50 mg, mhlawumbi ukwandisa kwi-75 mg. I-S4 powder iyaziwa ngokukwazi kwayo ukuphazamisa amandla, kunye neziphumo ziqala ukuba zibonakala ngokuphela kweveki kuphela.
I-S4 powder cas: I-401900-40-1 ingaba yinto efanelekileyo yokubuyisela xa ixutywe nge-SARM eyongezelelweyo eneempembelelo ezingcono ze-anabolic, umzekelo, i-Ostarine. Lo mntu kufuneka asebenzise le nkunkuma kwi-50-75 mg ixesha elidlulayo kwi-4 kwiiveki ze-8.
Ukulungiswa okuphezulu, kuya kucetyiswa ukuba ubeke i-Andarine powder kunye neCarardar kunye ne-Ostarine ngenqanaba eliphindwe kabini eliza kubonelela ngeziphumo ezingcono ngaphandle kwemiphumo engavumelekanga. Ukongezelela, umntu makabe yinto yokutya ukutya okungenani i-30% yeekhalori ezivela kwiprotheni ephilileyo.
4. ISARMS I-Andarine ephakamileyo (i-S4) Imijikelezo yee powder
I-S4 (i-Andarine) I-CAS ye-Powder: I-401900-40-1 yindlela ekhethiweyo nje ngaphambi kokuba ukhuphiswano kuba lithatha ngokuqhelekileyo ukuba lwenzeke ngokubonakalayo. Ingabandakanywa kwi-steroid ye-anabolic ukuphucula umjikelezo wokusika, okanye ukukhutshwa kwe-SARMS kungaveliswa, kubandakanye i-Andarine powder ibe namandla ukuhla ukusinda umjikelo.
I-S-4 Powder Unobomi obunemizuzu yeeyure ze-4, kunye neengcebiso ze-dose zemihla ngemihla zi-50-75mg kwaye zibekezeleleka kwi-100mg, kodwa kulungile ukuqala ngomlinganiselo omncinci kwaye ukwandise ngokuthe ngcembe ukunciphisa imiphumo emihle. Unokuthatha amaxesha e-2 imihla ngemihla okanye kwimizuzu ye-3. Unako ukuthatha i-Andarine powder ngokufanelekileyo kwii-8-iiveki ezide, akusiyo i-hepatotoxic engafani ne-oral steroids kunye neziyobisi ezifanayo, kwaye akudingeki ukwesaba nayiphi na ingxaki kwisibindi sakho.
Ngezantsi kwetafile kubonisa isampula yeKararine (GW) kunye ne-Andarine powder (i-S4 powder) Umjikelo:
Iveki ye-Andarine (powder S4) iKardiarine (GW)
Ukusebenzisa i-S4 (i-Andarine) I-CAS ye-powder: I-401900-40-1, ndincoma ii-8 iiveki kwii-50mg ngosuku ngemjikelezo. kwaye khangela ukuba imiphumo yombono wakho uphantsi okanye into evakalelwa kukuba ayikwazi ukuyenza. Ukuba kulungile, qhubeka unyuke uze uqhube i-70mg, ngaphandle kwesikali ukuya phantsi phantsi kwe-50mgs / ED. Musa ukudlulela phambili, njengokuba unako ukuvalela encinane.
5. I-SARMS I-Andarine powder I-S4 i-powder Benefits
Andarine powder S4 powder I-CAS: I-401900-40-1 kukusetyenziswa kwezobisi kunye nophando kuphela. Abaphandi baye baphando ngeenzuzo ezininzi ze-S4 powder njengonyango ukuphucula impilo ye-muscle kunye neethambo. Uphando alujoliswanga nje ngesisipha kunye neethambo ngokwawo, kodwa i-body overall pathways that controls muscles and bone. Ukongezelela, ngaphandle kweenzuzo zayo zokwakha imisipha, i-S4 powder ayiyi kubangela ukulimala kwesibindi, inokuthintela i-gynecomastia (amabele awandisiweyo kumadoda) kwaye inokunceda ekuphuculeni impilo yakho yonke. Ixhamle iingeniso zeemodyuli ze-androgen receptor (i-SARM) ezifana ne-S4 (Andarine) Ubunzima xa kusetyenziswa uphando lwezobisi kuphela:
Ukuphucula ubuhlungu besisundu (xa unyango lwe-muscle ukubhubhisa izifo)
Amandla angakumbi kumadoda
Akukho miphumo echaphazelekayo efana ne-anabolic steroids
Ionyango ezijoliswe kwiimfuno ezithile kunye neemfuno zokwakha imisipha
Ukukhula okuncinci kakhulu kwizitho zesini zesini ezifana ne-prostate.
I-Testosterone ayinakunciphisa nayiphi na indawo ngexesha lokubuyiswa komjikelezo weposi.
Umlinganiselo we-LDL / HDL awuchaphazelekayo okwenza kube ngumngcipheko we-cardiovascular risk.
Ekhethekileyo kakhulu ekukhethweni kwenyama kunye nokukhula oku kuthetha ukuba akuyi kubangela ukwandiswa kwentliziyo okanye umonakalo kumalungu angummelwane.
AmaSARM ayifuni ukusetyenziswa okanye ukutshatyalaliswa kwe-enzyme yesibindi ukuze kusebenze iziphumo zabo ze-anabolic. Oku kususa nayiphi na ingozi ye-hepatotoxicity okanye i-hepatitis.
Nangona iiSARM ezifana ne-S-4 powder cas:401900-40-1 azinamandla ezinjenge-steroids ezifana Winstrol powder, abayifuni i-long cycle ye-post yonyango kwaye ingaqhutyelwa ngebhayisikili emva komnyaka. Ngaphezulu kwekota, ukufumana iziphumo ezifanayo kunokwenzeka.
Iimpawu ze-SARS zibanamabhinqa kakhulu kwaye azibangeli izinto ezigqithisileyo zamadoda ezifana nezici zesini.
I-0% inethuba lokunambitheka, ukunyuka kwesifuba samadoda, okanye ukunyuka kunoma yimuphi umqondiso wesibini ngexesha lokubuyiswa komjikelezo weposi.
I-S-4 ibonisa ukunyuka okukhulu kwimizimba ye-muscle kune-DHT.
6. ISARMS S4 (Andarine) Iimpembelelo zecala lePowder: Uza "FUNDA" Oko Ukubonayo
Ukuxhalabisa kakhulu kunye nemiphumo emibi eyaziwa ngokuqhelekileyo ye-S-4 Powder yimiba ebonakalayo, ibophelela kwi-ocular receptors kwiso ukudala i-tints yellow faint, ngezinye izikhathi yenza kube nzima ukutshintshela ebumnyameni. Ezi ziphumo zecala zihlukile kwi-S-4 kwaye ngamanye amaxesha zingaphaya. Ukuba ezi ziphumo zecala zikhona, khawuyeke ukuthatha i-S-4 Powder iintsuku ezimbini kwaye uhlale kwimihla ye-5 ngomhla we-2. EZIPHUMA AZIZIMI! Xa i-ligand (njenge-SARM) ishiya inkqubo, iziphumo zinyamalale ngokupheleleyo.
Ekugqibeleni, i-S-4 Powder kunye nezinye i-SARM ziye zaziwa ngenxa yokudakumba kubantu abaninzi. Oku kuye kwafunyanwa njengento engaphezulu kwengxaki yeengqondo kunokwimeko yomzimba. Abaphandi abanemicebe ehluphekayo naluphi na ukuphazamiseka kwengqondo kufuneka baqaphele xa besetyenzisa le khemikhali.
I-S-4 Ifowuni yomnxeba: I-401900-40-1 yinkxalabo encinci kwimilinganiselo ephezulu. Ngokuthelekiswayo, akunjalo njengokunyanzelisa I-LGD-4033 Powder, kodwa ngaphezulu Ostarine powder. Isiphakamiso kukulandela ukusetyenziswa kwayo kunye ne-post -rapy ye-post-rhythm regimen kwangoko. Nangona kuthiwa i-mini-pct echitshiweyo yinto efanelekileyo yokubuyisela, ukusetyenziswa kwezibonelelo ezifana ne-HCGenerate kwanele ukujongana nokuncitshiswa okuncane okubangelwa.
Le protocol elandelayo yindlela ekhuselekileyo kunye neyona ndlela efanelekileyo yokubuyisela i-Andarine powder (i-S4 powder), iya kunceda umsebenzisi anciphise kwaye uthemba ukuba umphumo wokujonga umonakalo omkhulu ungabikho.
I-Andarine powder (i-S4 powder)
* Ngeli nqanaba kufuneka ugwebe amacala ombono. Ukuba azincinci, wandise ama-dosage nge-10mgs; ukuba awukhululekile, unciphisa amanani ukuya kumazinga alawulwayo (malunga ne-25-50mgs ububanzi).
* Ukuba uziva ukuba amahlangothi alungile kwi-60mgs, unokwazi ukunyuka ukuya kumatshini we-70-80mgs.
* Ngeli nqanaba, mhlawumbi ungumnye wabafana abafumana amacala amancinci okanye amacala alawulwa kakhulu kwi-Andarine powder. Unako ukunyuka ukuya kwi-100mgs / ED ephezulu. KUPHELA ukuba ukhululekile.
7. Yintoni omele uyiqwalasele Ngaphambi kokuthenga iS4 (Andarine) Ubuninzi?
I-Andarine powder cas:401900-40-1 , aka Acetamidoxolutamide (zama ukuthetha ukuba kathathu ngokukhawuleza), unokuthengwa ngokuthe tye kwi-intanethi apha.
Kodwa ngaphambi kokuba uthenge (okanye nayiphi na i-SAR kule nto), kufuneka ufumane ingqiqo yokuba isebenza njani. I-S4 powder isebenza ngokubambisa kwi-androgen receptor kwaye ibopha kuyo. Njengoko inamathela kwi-receptor, i-S4 powder idibana nayo testosterone powder, okwenza ukuba ivelise izakhi zofuzo eziye zenza ithambo kunye nokukhula kwemisipha.
Lo msebenzi okhethiweyo we-anabolic uvelisa iprotheni eyongezelelweyo echaphazela ukuphuhliswa kwemisipha, oku kuthetha ukuba isebenza ngendlela efana ne-steroids kodwa ngaphandle kwayo yonke imiphumo emibi. Ngokungafaniyo 'nemigodi, i-S4 powder ayichaphazeli izitho zesondo okanye iprotate.
Ngenxa yezi zizathu, uye wafundwa ngokucophelela ngokusemandleni akhe ekunyangeni i-osteoporosis, ukuguqulwa kwamascle kunye ne-hypogonadism.
Kodwa oku akuthi ukuba i-Andarine powder ayinayo nayiphi na imiphumo yecala. Ngokuphambene noko, kunokukhokelela kwimiphumo engathandekiyo, eyona nto ibaluleke kakhulu ekuboniseni ukuphazamiseka kombono. Enye yeempembelelo eziqhelekileyo eziqhelekileyo zokusetyenziswa kwexesha elide le-Adarine (ngaphezu kweeveki ze-8), lo mbono ophazamisayo unokuhamba kunye ne-jaundice encinane yamehlo.
Ngalinye icala, ngelixa u-anabolic steroid usetyenziso lukhokelela ekunyukisweni kwenyama yesilisa, i-Andarine powder ayifuni ukukhuthaza ukwanda okukhulu kwizinga le-serum estradiol.
Kwaye akunjalo apho izibonelelo ziphela. Masithi nje, ukuba i-Mini-Me yakho ayibhukuda ngokufanelekileyo, i-Andarine powder iye yaboniswa ukunceda.
Enyanisweni, i-S4 powder yaqala ngokuyinkolelo yokukhulelwa kwindoda ngenxa yokukwazi ukukhuthaza i-spermatogenesis. Akukho zifundo eziboniswe ukuba i-Andarine powder inokunyusa ukwanda komntu kodwa inokufumana i-mojo risin 'ukuba uyifumana intsingiselo yam.
Ezinye iincwadi zenzululwazi zikholelwa ukuba kubalulekile ukugcinwa kophuhliso lwamadoda kubandakanya ubunzima besisundu nokubunjwa komzimba. Kwaye kunzima ukuphikisana nesayensi.
8. ISARMS S4 (Andarine) Ukuhlaziywa kwePowder: Ngaphambi nangemva kweZiphumo
Abasebenzisi abaninzi be-S4 i powder baye bathetha ngeSARMS S4 (Andarine) Ubunzima ngaphambi nangemva kweZiphumo. Kuyamangalisa ukuba baninzi. Yintoni eyenza isixhobo esininzi samandla ngendlela abantu abangayisebenzisa ngayo ngaphandle kokufumana iziphumo zecala ze-androgenic ezinzima. Ngoko ngokusisiseko, oko kuthetha ukuba ukuthatha i-S4 powder akuyi kukuvumela ukuba ube nama-acne and baldness. Ngaphandle kokukhula kancinci kweenwele zomzimba kunye neentlobo zezilwanyana, iS4 powder cas:401900-40-1 akasoze abe negalelo kubo.
Ngokusebenzisa i-SARMS ye-S4 powder, ephantse iyafana Masteron Powder, iziphumo ezibalaseleyo zifumaneka apha apha. Abasebenzisi beemveliso baye bafumana utshintsho olumangalisayo kwimibutho yabo ngeeveki ezimbalwa zokusebenzisa iziyobisi. Bafumana izihlunu ezinomzimba kunye namandla abo kunye noxinezelo. Yintoni ekhoyo apha, isichengisisi sibazisa kwiimfucu ze-fat oxidation ezikhuculweyo kunye nobunzima bomzimba kunye nobunzima bomgangatho. Xa kuziwa kwi-catabolism edibene ne-calorie deficient, i-S4 powder isebenza ngokumangalisayo kunye nayo kwaye iyayibeka.
9. Kutheni abantu abaninzi basebenzisa i-Andarine powder (i-S4 powder) ngaphezu kwe-steroids?
Kukho abasebenzisi abaninzi be-steroid abaye baphenduka indlela yabo yokuphuma kwi-steroids ukuba batshintshe ekuthatheleni I-Andarine powder (i-S4 powder) Ipowder Iimeko: 401900-40-1. I-Andarine powder inikeza iziphumo ezifanayo kwi-steroids kodwa isicatshulwa sisendlela esiphephekileyo kunokuba iphela. Ngaphezu koko, ezinye izizathu zilandelayo:
I-Testosterone ayinakuncipha kulo lonke ixesha lokubuyisela.
Ama-SAR ayidingi ukusetyenziswa kwe-enzymes yesibindi ekusebenziseni iziphumo zabo ze-anabolic. Oku kususa nayiphi na ingozi ye-hepatitis okanye i-hepatotoxicity.
Inika uphuhliso oluncinane kakhulu xa lufika kwizitho zomzimba zesini zesibini.
Isilwanyana sinobubele besifazane. kwaye angabangeli iziganeko ezigqithisileyo zomntu ezifana nezixhobo zesini.
I-0% inokwenzeka yokuba ulwabiwo lwentombazana yesilisa, ukuxhamla, okanye ukuphakama kwayo nayiphi na into ebhinqa kuyo yonke i-post cycle cycle.
Akukho nto ibangela umonakalo entliziyweni.
Inxalenye yeLDL / HDL ayixhatshazwayo eyenza i-cardio ingozi yengozi.
Ikhulula ubuncwane bobuncwane kunye nesikhokelo sesifuba sendoda.
I-S4 (i-Andarine) I-Powder inikeza ukomelezwa okukhudlwana kwiisisipha ze-muscle xa kuthelekiswa ne-DHT.
Ngokukhethekileyo kuphela ekukhetheni kunye nokukhula okuthetha ukuba akusayi kubangela ukuba intliziyo ikhulise okanye ingozi kwizitho ezikufutshane. Nangona i-SARM ezifana neS-4 ayinamandla njengama-steroids afana no-Winstrol, abayidingi unyango oluphambili lwezithuba kwaye kuqhutywe ngebhayisikili rhoqo unyaka wonke.
10. Kuphi ukuthenga i-Sarms i-S4 (i-Andarine) I-Powder?
Kulula ukuthenga Sarms Andarine powder. I-intanethi yaziwa njengendlela ekhawulezayo kunye nekhuselekileyo yokuthenga iimveliso ezifana ne-S4 powder case:401900-40-1. Unikwa ngeendlela ezahlukeneyo zokuthenga kwakho. Okuninzi, uya kunikezwa izaphulelo nganye kwigrama oyithengayo. Nesiqinisekiso sokubuyiswa kwemali sinikezelwa. Kodwa ukuqwalasela abathengisi be-intanethi, kufuneka uqaphele ngokunjalo. Kungakhathaliseki ukuba ixabiso legrama liphantsi kangakanani, elona lihle emehlweni akho, kufuneka lihlolwe kakuhle. Ngenxa yoko, kufuneka ukwazi imvelaphi yomthengisi wokuqala ngaphambi kokunika ithemba lakho.
tags: Andarine powder, ukuthenga i-Andarine powder, uthenge i-S4 powder, S4 powder
Митко Ангелов10 / 01 / 2018 kwi-5: 08 ntambama
Здравейте интересувам се от този продукт на прах S4 (Андарин) .Колко време трябва да се приема максимум за максимални резултати? И със какво е най-добре да се комбинира за да се постигне 100% ефект? Колко пъти може да се правят цикли в годината? I-12 i-90 ilandelayo kunye ne-50мг на ден това са I-4,5 kunye ne-XNUMX? I-Cardarine (GW) и от там горе о ва о?? ?м? кажете каква е цената ще чакам вашия отговор благодаря 🙂
Stanislav06 / 06 / 2018 kwi-7: 15
Isikhokelo sesinyathelo kunye nesinyathelo sokuthenga i-LGD-4033 powder online	I-IDRA-21 ipowder benefits